Nke a bụ ọrụ anyị depụtara na mpaghara mgbasa ozi ahụ.
Ụdị omume kwesịrịrịrịrịrị dị.
Achọghịrị ịma aka nke ọgbụgba nke Art & Crime nke Mpụ nke Germany
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 13. August 2020
Know maara na ndị German zuru ego a ma ama na agwaetiti Yap dị na Micronesia ma na-echekwa ya na ebe ngosi ihe mgbe ochie dị na Leipzig kemgbe afọ 130.
Ọ bụ ya mere enwere nnukwu mmasị na gọọmentị etiti gọọmentị German kwesịrị inyere aka ma chebe Micronesia megide ebili mmiri ahụ. Mba ndị mepere emepe nwere ọrụ maka okpomoku zuru ụwa ọnụ ma na-elekọta Micronesia, ebe ndị mmadụ nọ ebe ahụ na-efunari agwaetiti ha n'oké osimiri, a ga-akwagharị ha. Akụkụ isii nke Rai Stone Money nwere nha ndị a: 1. 24 dayameta 6.4 cm 2. 50 cm dayameta 10.4 cm dayameta 3. 48 dayameta 10 cm oké 4. 4 dayameta 5cm oké 5. 7 dayameta 5 cm oké 6.30 dayameta cm 5cm okpon.
Anyị chọrọ ka nkume ndị a laghachi na micronesia, ụlọ ihe ngosi nka nwere ike dochie ya na mbipụta. Germany nwere ọtụtụ artefacts sitere na njem ịpụ na 1907, nke onye isi obodo Robert Berg, onye gọvanọ German nke mpaghara ahụ, ọ na-eme ọtụtụ mmebi na World Heritage nke Nan Madol & ziga narị narị iberibe site n'agwaetiti ọ bụla gaa Leipzig Nolọ ihe mgbe ochie, ebe arụ ka dị taa.
Asụsụ German Micronesian Creole kwesiri ibu ihe nketa ọdịnala ụwa. Ọ bụ naanị asụsụ Creole sitere n'asụsụ German.
Ndị Shokeh na Pohnpei manyere ndị German ịrụ ọrụ. Ugbu a oge eruola mgbe Germany ga-agbapụta ụgwọ akụkọ ya iji mezuo iwu na Micronesia. PixelHELPER chọrọ ịrịọ mgbaghara sitere n'aka gọọmentị Federal nke Germany na nleta Angela Merkel ịrịọ ụmụ Shokehs maka mmekpọ arụrụ aka a manyere ha.
Anyị chọrọ ịkpali obodo ndị German ịbanye na mmekorita obodo na Pohnpei na iji hụ na mgbanwe ụmụ akwụkwọ na-ebi ndụ. Studentsmụ akwụkwọ ga-enweta nsonaazụ nke mgbanwe ihu igwe ma ha ga-enwe ahụmịhe dị mkpa maka ndụ ha.
Ndi otu "ndi nchebe obodo" na German New Guinea. Kemgbe 1885, Bismarck Archipelago natara akwụkwọ ozi nchebe nke alaeze, na 1899 gọọmentị etiti weghaara ebe ndị "Companylọ ọrụ New Guinea" natara dịka iwu ala Prusian si dị. Mpaghara echekwara gụnyere Kaiser Wilhelm Land dị na New Guinea, Caroline Islands, ụfọdụ Solomon Islands, Mariannen, Neupommern, Neumecklenburg na Marshall Islands. Ndị uwe ojii German 19 na ndị uwe ojii mpaghara 670 dị na New Guinea na agwaetiti ndị ahụ.
Anyị na ụlọ ọrụ ndị German, anyị na-anwa ịkwụ ụgwọ maka mmegide megide mgbanwe ihu igwe na ịchọta nzụlite akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ anyị n'agwaetiti ahụ iji mee ka mmekọrịta German nke Micronesian sikwuo ike.
German South Seas, Germany zụtara #Micronesia na 1899 maka ụgwọ nke $ 4.5 nde ma tinye mpaghara ahụ na German New Guinea. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịchekwaa Sylt, agwaetiti bara ụba nke dị na Germany site na oke oke osimiri, gịnị kpatara na ọ bụghị obodo mbụ German kwa. Taa obodo a na - agbago oke oke osimiri na - ebilitekwa na ya pụta. Germany aghaghi imezu oke n'ọrụ ya. Ruo taa, Micronesia enweghị ụlọ ọrụ nnọchi anya na Morocco ma ọ bụ Germany. Germany n’onwe ya enweghị ụlọ ọrụ nnọchi anya na Micronesia.
Onye obula biri n ’obodo ma ghara irigide ya gha enwe nsogbu n a ocha nari otu ahuru. Na mgbakwunye na mgbukpọ nke Herero na Nama, Germany ka nwere ọtụtụ ihe na akara ọkwa mgbe ọ gbasịrị ọchịchị. Taa ndekọ aha ekwentị dị na Micronesia jupụtara na aha German: Thieme, Stützner, Keil na ndị ọzọ - ụmụ nke ndị ọchịchị obodo German na ụmụ nwanyị obodo.
Gọọmentị etiti gọọmentị German ga-emeghe ụlọ ọrụ nnọchite anya obodo ma tinye aka na nnapụta nke agwaetiti megide oke oke osimiri na ebili mmiri. Na der Deutschen Südsee, 📷
Achọghịrị ịma aka nke ọgbụgba nke Art & Crime nke Mpụ nke Germany August 13th, 2020Oliver Bienkowski
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 9. April 2020
Biko nye aka na paypal@PixelHELPER.tv maka imegide eze
Anyị na-eme ncheta ochichi onye kwuo uche ya na Thailand na June 24, 2020. Ndi otu Faiyen kwuputara okwu nkwuputara nke eze
Gburu maka Rama X.
N'achọ ikpe ziri ezi
Thais na-alụ ọgụ maka ọchịchị onye kwuo uche ya na nnwere onwe ikwu okwu na-akwado International PixelHELPER Foundation ịmalite mkpọsa megide Eze Vajiralongkorn nke Thailand, onye ọchịchị obi ọjọọ na onye na-eme ihe ike bụ onye, ​​site na enyemaka nke ndị otu ya, na-iwu site na egwu na mmaja na ndị agha.
Eze dị afọ iri isii na asaa ghọrọ eze na 67, mana ọ naghị etinye oge na Thailand. Ruo ọtụtụ afọ, ọ nọwo na-etinye ihe ka ukwuu n'oge ya na Grand Hotel Sonnenbichl n'obodo Garmisch-Partenkirchen na German, ya na ndị inyom ruru 2017 na nnabata nke ihe karịrị ndị ọrụ 20 na ndị isi n'obí eze.
Ọtụtụ n'ime ndị inyom ya na ohu ya mgbe ọ nọ bụ ndị mkpọrọ na Germany. Ha achọghị ijere Vajiralongkorn, mana ha enweghị nhọrọ. Isi mmalite na-arụrụ eze ọrụ na Bavaria na-ekwu na ndị ọrụ mgbakasị ya na-abụkarị ndị henchmen Vajiralongkorn na-eti ma tie ha ihe. A na-ese ihe a na-egbu n'ihi na Vajiralongkorn nwere mmasị na-ekiri vidio nke ndị nwere nsogbu.
Na Thailand, eze guzobere ụlọ mkpọrọ na ntaramahụhụ ntaramahụhụ n'otu n'ime obí ya. Enwere ike izipu ndị isi na ndị ọrụ agha ebe ahụ maka ọnwa ole na ole maka obere imebi iwu. A na-ata ha ahụhụ, tie ha ihe ma mesoo ha na iwu nke Vajiralongkorn.
Dịkarịa ala, mmadụ atọ na-arụ ọrụ eze nwụrụ na afọ ndị na-adịbeghị anya. Obí eze kwuru na mmadụ abụọ n'ime ha gburu onwe ha, nke atọ nwụrụ n'ọrịa ọbara, mana ọ bụ ihe a maara ebe niile na a tara ha ahụhụ ma gbuo ha atọ.
Kemgbe 2016, e gbuola mmadụ itoolu Thai na-agbago ọchịchị onye kwuo uche ya na-achọ ịkwaga ná mba ọzọ. Enwere ọtụtụ ihe akaebe na ndị ọrụ nzuzo nke Thai gburu ndị na-agbaso ntụziaka Vajiralongkorn.
Eze dị elu karịa iwu na Thailand ma nwee ike ime ihe n'enwetaghị ntaramahụhụ. Iwu a nyere ya ikike zuru oke ma o nweghị onye nwere ike ibugara ya ebubo ọ bụla ma ọ bụ ebubo mpụ.
Ndị na-ahụ maka ndị isi ndị agha na-eduga ndị agha Thai na-echebe ya ma na-akwado ya. Ndị agha Thai dị ka eze ndị eze, bụ ndị iro nke ọchịchị onye kwuo uche ya. Na narị afọ gara aga, ndị agha emeriela ike ugboro iri na abụọ mgbe ndị agha na-alụ agha ma na-etinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbe niile. Thailand enwebeghị ike ịmalite usoro ochichi onye kwuo uche ya na-adịgide adịgide n'ihi na ndị ọchịchị na ndị agha agba izula imebi iwu ịtụ vootu. Vajiralongkorn bụ ndị isi nke ndị agha karịrị 50.000 nọ na Thailand iji gbochie esemokwu ọ bụla.
Ugboro anọ na akụkọ ihe mere eme nke Thailand - 1973, 1976, 1992 na 2010 - ndị agha Thai gbagburu ndị nkịtị na-eme ngagharị iwe n'okporo ụzọ Bangkok iji chọọ ọchịchị onye kwuo uche ya. Ndị agha egbuola ndị nkịtị Thai karịrị ndị agha ala ọzọ ọ bụla na agha agha.
Vajiralongkorn bụ di na nwunye nke anọ ugbu a. Ọ hapụrụ ma wedaa nwunye ya mbụ ala obere oge ha gbachara alụlụ ma mesịa gbaa ya alụkwaghịm. Nwunye ya nke abụọ chụpụrụ na Thailand na 1996 yana ụmụ nwoke anọ ahụ. Ọ gbara nwunye ya nke atọ na 2014, mee ka ọ jide onwe ya n'ụlọ, ma bido imebi ezinụlọ ya ọcha. Ndị mụrụ ya, ụmụnne ya nwoke atọ, nwanne nwanyị, nwanne nna ya na ọtụtụ ndị ikwu ndị ọzọ jidere.
Vajiralongkorn lụrụ nwunye ya dị ugbu a otu afọ gara aga, ma ọ naghị ahụkebe ya ma nwee mmasị karịa iji oge ya niile na ndị isi ya na Grand Hotel Sonnenbichl mgbe nwunye ya bi na nkwari akụ na obodo Engelberg Switzerland.
Vajiralongkorn bụ eze kachasị baa ọgaranya n'ụwa nwere akụ nke ihe karịrị ijeri euro iri ise. Mana akụnụba a ezughị ya - kwa afọ ọ na-achọ nnukwu ego site na mmefu ego steeti ahụ, nke ndị ụtụ Thai na-enweta ego. N'afọ a, eze na-enweta ihe karịrị nde Euro 50 site na mmefu ego Thai.
Ndị nkịtị na-achọsi ike ma agụụ na-agụ ha ka ọrịa ọjọọ nke Pavid-19 na-agafe Thailand na ụwa niile, ebe eze na Grand Hotel Sonnenbichl na-ebi ndụ okomoko, na-emebi ego ụtụ ego buru ibu, ma na-akparị ego ya na ndị ohu ya. Ndị ọrụ e tiri ihe na ndị a na-emegbu adịghị anwa ịkpọtụrụ ndị uwe ojii Germany n'ihi na ha na-atụ ụjọ na a ga-emegwara ezinụlọ ha na Thailand.
Ọtụtụ ndị Thais maara banyere mpụ na obi ọjọọ nke eze ha, mana iwu draconian mechiri olu ha. Onye ọ bụla na-akatọ ọchịchị mgba okpuru nọ n'ụlọ mkpọrọ ọtụtụ afọ gara aga.
Ọ bụghị naanị ndị Thai na-ata ahụhụ site na King Vajiralongkorn. Ọ na-ebokwa ndị na-akwụ ụgwọ ụtụ German ụgwọ maka na steeti ga-akwụ ụgwọ maka nchekwa na nchedo. Ọ mebiri iwu ndị ruuru mmadụ na ala German - ịre ahịa na mmeso ụmụ nwanyị na mmekpọ ọnụ nke ndị ohu ya, onye ọ na-emeso dị ka ndị ohu. Ndị German ekwesịghị ịnabata nke a na obodo ha.
Ya mere, ndị na-akwado ọchịchị onye kwuo uche Thai na-akwado PixelHELPER Foundation ka hazie usoro ọnụ.
Anyị chọrọ ka ụwa mụta banyere nrụrụ aka na obi ọjọọ nke Vajiralongkorn.
Anyị chọrọ ka Germany chụọ ya n'ọrụ n'ihi na o mebiri ọtụtụ iwu.
Anyị chọrọ ka ekpe ya ikpe na Thailand maka mpụ o mere.
Anyị agaghị akwụsị mkpọsa anyị ruo mgbe a ga-eziga ya n'ụlọ ka o wee nwee ikpe nkwụmọtọ.
Ọ bụrụ na ịkwado anyị, biko zitere anyị ozi ma nye onyinye na PixelHELPER na weebụsaịtị anyị: https://pixelhelper.org/en/hilfe/
Anyị niile nwere ike ịkwụsị ọchịchị nke ịtụ ụjọ Vajiralongkorn ma weta ezigbo ọchịchị onye kwuo uche ya na Thailand.
Thai Democratic Defender Fund September 4th, 2020Oliver Bienkowski
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 19. January 2020
Nweta achịcha nye ndị ogbenye bi na Ait Faska
Ihe oru ngo putara n’etiti mbara ala okwute.
Ọnọdụ oru ngo August 2019
Anyị nwere obere ugbo, kilomita iri anọ site na Marrakech na Morocco, tụgharịrị gaa na ụlọ ihe nkiri ebe dị ndụ. Mmepụta n'okpuru anya igwefoto, anyị na-eji sọftụ enyemaka enyemaka onwe anyị nke usoro mmemme nke onwe anyị, anyị ga-enyekwa ndị enyemaka enyemaka ndị ọzọ maka ọdịnihu.
Ing na-ere nnukwu ụlọ ọkụ na North Africa, Ait Faska Morocco
(5 mita ụlọ ewepụghị ụlọ, oke obere)
Na achịcha mkpọchi megide ụkọ nri kpatara agha & mgbanwe ihu igwe
Enyemaka Achịcha Mkpọ Mkpọ nke European - Nchịkwa nri maka Africa April 21st, 2020Oliver Bienkowski
Mkpesa sitere n'aka ndị na-enye ọnụọgụ abụọ site na steeti Moroccan. Obelisk bụ ihe anwụ ma ọ nweghị ihe jikọrọ ya na ncheta Uygur.
Akụkọ banyere Oké Mgbukpọ ahụ Moroccan na Wikipedia ekwughị banyere ogige ọrụ mmanye n'ọzara ebe ndị Juu nwụrụ. Ndị ozi ụlọ ọrụ Moroccan bibiri ncheta anyị mgbe otu afọ gachara. Anyị ewetakwara isiokwu nke ọrụ mmanye n'akụkọ ihe mere eme nke Morocco na Wikipedia iji lụ ọgụ megide akụkọ ụgha na mgbochi Semitism. Agbanyeghị na ọ bụ ntinye aka site na mbido igosipụta na ndị Uyghurs mebiri ikike ụmụ mmadụ.
Ogige ndị ọrụ mmanye Bou Arfa Ihe ncheta Oké Mgbukpọ ahụ dị na Morocco April 21st, 2020Oliver Bienkowski
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 17. January 2020
Nkwụsị nke Hong Kong dịka ị maara ya
China na-eme ihe gbasara iwu maka izizi iji merie ebe ndị Britain na-achị okpueze mbụ. Ndị ndu China na-atụgharịgharị ngagharị ngagharị ma na-agbagha ọdịda anyanwụ ụwa.
People'slọ omebe iwu nke ndị China na-agafe iwu #HongKong Security, nke n’ezie lie “Otu Mba, Sistemụ Abụọ” na Ọchịchị onye kwuo uche ya. Ntụgharị ọkụ na ọkọlọtọ nke #Bundestag #Bundesregierung & @HeikoMaas mara nnwere onwe nke Hong Kong. #HongKongNeedsHelp #HongKongProtests
Na nke mbụ kemgbe mmalite nke ọrịa corona, ọtụtụ puku egosipụtawo na Hong Kong megide mmetụta China na mpaghara nchịkwa pụrụ iche. Ndị uwe ojii jiri gas dọkatụrụ adọwa, fesara ose na nsị mmiri. E jidere ọtụtụ.
Mkpesa a mere na Sọnde bu ihe ndị Beijing kpalitere maka iwu nchekwa echebere maka ịmebi iwu na nkewa na Hong Kong. N'agbanyeghị mgbochi ndị a na-enwe nnọkọ corona, ọtụtụ puku mmadụ gara n'okporo ámá n'ọhịa dị na Causeway Bay na Wan Chai.
Heldfọdụ jidere ọkọlọtọ ndị kwuru, "Eluigwe ga-ebibi ndị Kọmunist China". Akpọwo oku ugboro ugboro maka nnwere onwe. Onu ogugu ndi agha nche rigoro ndi n’eme ihe ngosi a.
Ngagharị iwe ahụ gara n'ihu na mgbede. Ndị na-eme ihe ike na-ahụ anya tụbara windo ụlọ ahịa. N'ihi ọrịa ọgbụgba na corona, enwere ike iwu iwu n'ime obodo akụ na ụba na nnukwu ego Eshia nke mmadụ bi na ya, nke na-enye ndị otu asatọ ohere.
Britain agbazinyela Hong Kong na China afọ 150, mbụ Hong Kong Island, emesịa Kowloon na Territories Ọhụrụ. Nkwekọrịta ahụ gwụrụ na June 30, 1997. Ndị Britain nyefere China ala ha okpueze.
Onye ndozigharị China Deng Xiaoping (1904-1997) chepụtara okwu ahụ "otu mba, usoro abụọ" na 1980s iji mee ka nlọghachi Hong Kong bụrụ nke nwere ike n'ụzọ iwu. Deng kwuru na "Usoro abụọ dị na otu obodo ga - ekwe omume ma kwerekwa ya," Ha ekwesịghị ibibi sistemu na agwaetiti, anyị ekwesịghị ibibi nke ọzọ. "
Nnwere onwe site na mkpọsa HongKong / Anti China June 15th, 2020Oliver Bienkowski
[gallery_bank ụdị = ”oyiyi” format = ”masonry” aha = ”eziokwu” desc = ”ụgha” anabata = ”eziokwu” ngosi = ”eziokwu” ngosi = ”ahọrọ” no_of_images = ”17 ″ sort_by =” random ”animation_effect =” ibiaghachi ”album_title =” ezi ”album_id =” 21 ″]
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 19. February 2018
nach #PixelHELPER Nchoputa n’ime #Bundesarchiv ga #Wikipedia Nke edemede site n'aka Hans #Bahlsen enwere ike idegharị. Ọ rụrụ ọrụ na nchekwa ọrụ nke osote onye isi iwu ruo 1944. Ndị Nazi jikọrọ aka #Zwangsarbeiter & Actlọ ọrụ na Ukraine #VerenaBahlsen
Ndị ọrụ mmanye na Bahlsen Oetker & Co. KG April 21st, 2020Oliver Bienkowski
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 20. April 2014
The Buntesnachrichtendienst na-akwado ndị na-akwado ọrụ na mmegharị ala nke na-arụ ọrụ maka nnukwu mgbanwe systemic gafee Europe. Ndị na-ese ihe na ndị ọchụnta ego si gburugburu ụwa na-enweta ego maka ọrụ nwere ọgụgụ isi mara mma maka ndị na-eme ka ndị ụlọ ọrụ nwere onwe ha pụọ ​​n'ụlọ mkpọrọ, na-enyere ndị ọcha aka na-ekpughe nrụrụ n'ụwa niile. Anyị na-akpa ike na ndị iro anyị kwesịrị iwere anyị kpọrọ ihe. Anyị na-adabere na nnwere onwe nka na nnwere onwe ikwu okwu.
United Stasi nke America guzo na mgbidi ụlọ ọrụ ndị nnọchianya America na Berlin na ndị nnọchi anya ndị America ndị ọzọ na Germany, gụnyere Düsseldorf, Frankfurt na Hamburg. Ihe kpatara nke a bụ izo enweghị nkọ na NSA na ọrụ nzuzo nke ndị America.
Anyị bụ ọrụ ọgụgụ isi mara mma - maka itinyekwu ndị ọchịchị n'ọchịchị June 15th, 2020Oliver Bienkowski
Vogelschiss gegen Hass - Kaadị uhie maka ndị na-ezigara ịkpọasị asị
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 16. January 2013
Mechie taa, megide #Hate ugbua enwere onye n’ile Ngwọta. @PixelHELPER Na-ezigara ndị niile na-akpọ asị asị. Nye onyinye iji kwụọ ụgwọ paypal@PixelHELPER.tv & degara anyi onye kwesiri inweta nnyefe ozo. Leta 1 gaa @_edonalphonso site na @world
Na onyinyo omume nke nrụnye nka #Fencing4Humanity, ihe okike nke mpaghara mpụga Europe, nnụnụ ndị mbụ amachara. Si ebe a abiala #Bird shit megide #Hate agha na Internetntanetị.
Ihe owuwu Vogelschiss na Morocco
Na mba dị anya na Morocco, anyị na-ewulite ihe owuwu Vogelschiss anyị ugbu a iji zigara obere ihe ngosi Vogelschiss nye ndị na-egosipụta onwe ha na #HateSpeech.
Nnụnụ na-ata ahịhịa anyị nke ọma
Nnụnụ na-arụ ọrụ megide ịkpọasị
Mwube ulo nnụnụ anyi
Vogelschiss gegen Hass - Kaadị uhie maka ndị na-ezigara ịkpọasị asị June 15th, 2020Oliver Bienkowski
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 17. January 2012
Ihe ndị a bụ ezigbo ihe atụ nke ọgụ megide ọchịchị onye kwuo uche ya site na ntụgharị aka. Kama inyocha echiche nke ọrụ anyị, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eme ngwa ngwa megide arịrịọ ụmụ amaala anyị na ọwa niile, nke na-egosi anyị na anyị nọ n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụrụhaala na ụlọ ikpe gọọmentị anaghị ekpebi, mkpesa ụmụ amaala anyị agaghị anabata nke ọma n'okpuru §17 nke koodu obodo. Taa, a na-ejikwa ọbụna magazin a na-eme ihe na-adịghị mma maka iwuli ọnọdụ. Anyị na-arịọ ugbu a ngosi ngosi.
Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị chọrọ imechi ụlọ ọgwụ Loreley na-arụ ọrụ site na ụzọ nkwenye nke a na-ejikarị na steeti ọchịchị aka ike. Ndi obodo na ndi otu ime obodo na-arigo n’ulo a ka ewe gosiputara umu amaala ha dika nke ulo ikpe nhazi. Citizensfọdụ ụmụ amaala akpọọla oku ka e nye onyinye na ngosipụta nke ebumnuche ụmụ amaala ochie "Maka ichebe ụlọ ọgwụ Loreley", ụlọ ọrụ ndị mmadụ enyegoro ihe karịrị € 10.000 na ọgbakọ nkwado ụlọ ọgwụ. Anyị anatala 0 € na onyinye ma na-akatọ arịrịọ ụmụ amaala anyị maka ịgbaso ndụmọdụ nke Mehr Demokratie e. V. dere nọmba akaụntụ onyinye anyị na mpempe akwụkwọ.
Ohere ikpeazụ iji chekwaa Ahụike Loreley bụ arịrịọ ụmụ amaala nọ na obodo atọ ọ bụla. Onye ọ bụla nwere ebe obibi mbụ n'obodo ahụ ma karịa afọ 3 nwere ike ịbanye. Biko kesaa akwụkwọ niile dị na mpaghara gị.
Pịgharịa gaa na mpaghara ịhọrọ n'etiti Oberwesel, St.Goar & the Hunsrück-Mittelrhein.
Site na echiche ọrụ ọrụ ọhụụ nke PixelHELPER Foundation, anyị na-eduga ụlọọgwụ Loreley ka ọdịnihu dị mma!
Arịrị ụmụ amaala maka obodo Oberwesel
Kirie ihe onyonyo a ka ibudata ndebiri ndebiri. Kwesịrị ka ekesaa nke a yana echiche onye ọrụ.
Arịrị ụmụ amaala maka obodo Sankt Goar
Arịrị ụmụ amaala maka obodo Hunsrück-Mittelrhein
Chekwaa ụlọọgwụ Loreley. PixelHELPER Foundation na-abụghị uru GmbH chọrọ iweghara ụlọ ọgwụ ma nọgide na-arụ ọrụ ya dị ka ihe ngwọta 1 ụlọ. Ntụgharị ọkụ na Ministry of Health na Berlin
Ọnọdụ ugbu a 20.04.2020/21/15 XNUMX:XNUMX
Na kompeni ugbua Eprel 2020 nke CDU Oberwesel ihe adịghị mma, ekwuola na ụlọọgwụ ahụ agaghị abụ uru.
Krankenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel, dị ka aha ahụ si gosi, ọ bụ GmbH abụghị nke GmbH na-abụghị uru. A napụ ya na ụfọdụ ụtụ isi mana ọ bụghị uru na-abụghị. Na nchikota, ekwesiri iburu n'uche na mwepu ya na ụtụ ahia ahia,
Enyere ụtụ ahịa nke ire ahịa na ụtụ ala maka ụlọ ọgwụ niile na-emezu ihe achọrọ nke § 67 AO. Nke a bụ n'agbanyeghị ma ụlọ ọgwụ anaghị akwụ ụgwọ. A na-atụpụrụ ụtụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ naanị maka ụlọ ọgwụ ndị na-abaghị uru nke pụtara §§ 51-68 AO. N'oge a ọ bụ GmbH gụnyere ohere niile ịdọrọ ego. Emechiri ngalaba ma wezuga teknụzụ ụlọ ọgwụ ndị ọzọ. Nchigharị n’ime GmbH nke anaghị akwụ ụgwọ. Nyere aka n’arịrị ụmụ amaala ka ha gaa n’ihu n’agaghị arụ ọrụ n’ụlọ ọgwụ facebook.com/loreley-klinik N'inwe ụlọ ọrụ ụgwọ ọrụ anaghị akwụ ụgwọ, enwere ego ka ukwuu karịa n'usoro ụlọ ọrụ amachibidoro ịkwụ ụgwọ, enweghị uru ọ bụla nwere ike ịgafe ọzọ, mana a ga-eji ya maka ebumnuche na-abụghị uru nke ụlọ ọgwụ ọhụrụ anaghị akwụ ụgwọ. N'ọnọdụ anyị nke ahụ ga-abụ ụlọ ọgwụ ahụ n'onwe ya, ụlọ ọrụ okenye na ebe ọmụmụ ihe ọhụụ maka ndị nwere nkwarụ na ebe ochie dị na Sankt Goar. Maka ozi ndị ọzọ, pịgharịa gaa na ibe a.
Ọnọdụ ugbu a 19.04.2020/13/00 XNUMX:XNUMX
Anyị na-ebuputa arịrịọ ụmụ amaala atọ n’obodo ndị nwere oke iji hụ na nzukọ “ndị na - eketa oke pụrụ iche na-arịọ Marienhaus Holding GmbH ka ị nyefee osisi 55% n'ụlọ ọgwụ ka GmbH PixelHELPER Foundation na-abụghị uru, dị ka ị nyerela Red Cross.
Na mgbakwunye, a ga-agbanwe ụlọ ọgwụ ahụ ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ na-abụghị uru iji debe uru niile dị na ụlọ ọrụ ahụ n'ọdịniihu wee ghara ime ka ndị na-eketa eketa kesaa ya. Iji mee nke a, anyị ga-anata akara dị puku 300 n'aka ndị na-atụ vootu n'otu onye ọrụ ebe a, ọ bụrụ na ndị isi obodo anaghị ekwenye na ụmụ amaala, a na-eme mkpebi ụmụ amaala.
PixelHELPER Foundation na-abụghị uru GmbH mepụtara echiche na ntinye maka nlekọta na ịga n'ihu nke ụlọ ọgwụ na Oberwesel. Ntinye aka nwere ihe mgbakwunye pụrụ iche na ntinye ga-abụrịrị na ebe Sankt Goar dị. Nke a gụnyere ụdị ibi ndụ ọhụụ maka mmadụ 8-16, yana mgbakwunye agụmakwụkwọ maka ndị nwere nkwarụ.
Hospitallọ ọgwụ dị na Oberwesel kwesịrị imegharị ngalaba ndị ọkachamara chọrọ ka ngalaba nlekọta ahụike siri ike iji rụọ ọrụ dịka ụlọ ọgwụ zuru oke.
Na imekọ ihe ọnụ na imekọ ihe ọnụ na Mahadum Marburg na ụlọ ọrụ teknụzụ ọgwụ dị nso, ogbako a maka ndị nwere nkwarụ ga-ewepụta ihe dị mkpa na ahụike osisi nke ga-eji maka mbupụ ya na Africa.
Maka owuwu ihe omumu ohuru nke ndi nwere nkwarụ, tinyere ibi ndu na - egbochi, ego kwesiri ka EUR 600.000 kwesiri itinye n'ọrụ site na Aktion Mensch.
Nkpukpo nke PixelHELPER choro igosiputa n'uzo doro anya ka enwere ike isi gboo ihe ndi mmadu n’achi n’uzo ohuru na odi n’ihu n’obodo a.
Iji hụ na nchekwa ego, PixelHELPER Foundation ga-elekwasị anya imepe ebe uru ọhụrụ iji hụ na ọ ga-aga n'ihu dị ka ụlọ ọgwụ na-abụghị uru, anyị na-atụkwa anya na ego sitere na njikwa ụlọ ọgwụ iji gaa n'ihu na-arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ na mụbaa.
N'ebe a, Pixelhelper Foundation, site na ndị na-akwado ya, nwere ike ịdaghachi na netwọtị ama ama na amụma ahụike nke German.
Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ na-akwụghị ụgwọ mmachi anaghị akwụ ụgwọ maka ọdịmma nke onwe ya, enweghị nkesa ekenye ndị na-eketa oke, anyị na-etinye ego ọ bụla na ụlọ ọgwụ na ndị nwere nkwarụ ọrụ aka.
Ilekwasị anya n'ụlọ ọgwụ na-abụghị uru na-adịkarị mma maka ọdịmma - mmekọrịta na ọdịmma nke onye ọrịa. Okwu a bụ "anaghị akwụ ụgwọ" dabara adaba maka iwu ụtụ isi, n'ihi na ọ bụ naanị ihe ndị edepụtara na paragraf nke 52 nke koodu ụtụ na-ejere ọha mmadụ ozi bụ ndị a lere anya dị ka ndị na-anaghị akwụ ụgwọ na usoro iwu ụtụ isi - dịka ọmụmaatụ, nkwalite na ngalaba ahụike GmbH (gGmbH) anaghị enyere aka na ụtụ isi. . Na nzi, GGmbH ji ụgwọ ka ọ jiri ego ndị ewepụtara naanị maka ebughi uru ọ bụla.
Yabụ anyị chọrọ ịbụ ụlọọgwụ ọkachamara na-anaghị akwụ ụgwọ - ma na-eme ya. Nke a na-enye anyị ohere mgbanwe, nke na-abara onye ọrịa uru. N'ihi na anyị abụghị naanị ịrụ ọrụ dị oke elu na irube isi na ụkpụrụ ọhụụ, kamakwa dịka ụkpụrụ mmadụ si dị, ikike na akụ na ụba - nke a pụtara na anyị chọrọ iji ego anyị niile na akụnụba anyị maka abamuru nke ndị ọrịa.
Nzụlite: PixelHELPER Foundation tọrọ ntọala site n'aka ọtụtụ ndị Freemasons na onye omenkà nwere ìhè Oliver Bienkowski. Na Hamburg, e nwere ụlọ ọgwụ Masonic na Rissen, nke Red Cross na-arụ, yana asonlọ Masonic ezumike nka dị n'etiti Hamburg. Hospitallọ Ọgwụ Freemason dị na Hamburg mepere ọnụ ụzọ ya na Ọktọba 3, 1795 na Dammtorwall dị ka ụlọ ọrụ izizi maka nnabata ndị ọrịa, nke bụbu na-enweghị kpamkpam na Hamburg. Emebere ya ka ọ bụrụ ụlọ ọgwụ maka ndị odibo ụmụ nwanyị ma gbasaa afọ ole na ole ka nke ahụ gasịrị maka ndị ohu nwoke .. Mgbe akpọrọ PixelHELPER Foundation, akụ ndị ahụ gara Freimaurer Hilfswerk eV, nke bụ akụkụ nke nzukọ ọrụ ebere.
Ọnọdụ ugbu a 16.04.2020/12/00 XNUMX:XNUMX
Ugbu a, anyị na-achọ ụlọ mgbazite na ogbe ndịda Oberwesel. Anyị ga-eji ọnọdụ a hazie arịrịọ ụmụ amaala 3 iji lekọta ụlọ ọgwụ na iwepụta achịcha mkpọ maka ogige ndị gbara ọsọ ndụ na ndị na-enweghị ebe obibi. Ozugbo achọtara ọnọdụ ahụ, edepụtara mbinye aka maka obodo 3 niile nwere ike ibudata na ibe a. Mgbe itachara akara ndị a, ị nwere ike nyefee nwa amaala arịrịọ anyị na saịtị ahụ. Arịrịọ ụmụ amaala na-amalite tupu Mee 01st, 2020
Ọnọdụ ugbu a 14.04.2020/12/00 XNUMX:XNUMX
Anyị na-ahụ na enweghị ike ịkọwapụta onyinye anyị site n'aka Marienhaus Jide aghụghọ doro anya nke ndị ọzọ na-eketa. PixelHELPER Foundation Gemeinnützige GmbH kpọtụụrụ onye ọka iwu na-ahụ maka njikwa na Koblenz na mkpakọrịta Mehr Demokratie eV maka nyocha nke arịrịọ ụmụ amaala ịmalite "Mgbakọ General nke Pụrụ Ighaghasị mkpebi nke Eprel 09.04.2020th, 1". Nrube isi nye arịrịọ ụmụ amaala dị njikere, mana a ga-enyocha ya n'ụzọ iwu. Arịrịọ ụmụ amaala ahụ ga-amanye ndị isi obodo ime mkpebi na nzukọ a na-enweghị atụ. Onye ọka iwu ọkachamara na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-enyocha usoro iwu asọmpi. Site na nzukọ ndị na - eketa oke pụrụ iche, a ga - ekenye oke ahụ na PixelHELPER Foundation gGmbH, enwere ike ịga n'ihu na - arụ ọrụ ụlọ XNUMX ọzọ na Oberwesel, dịkwa ka ichekwa ụlọ ọrụ agadi.
Agbanyeghị na anyị zigara ndị nkwuchite ụlọ ọrụ maka Marienhaus Holding ihe anyị weghaara ugboro abụọ site na email, enweghị nzaghachi nye anyị ma ewezuga oku ekwentị sitere na Heribert Frieling.
Hospitallọ ọgwụ Loreley & Senior Center bụ ụlọ ọrụ ọha na eze maka Oberwesel. Na nnọkọ ikpeazụ nke ndị nwe ala na Eprel 09.04.2020, XNUMX, Marienhaus GmbH anabataghị nke a, agbanyeghị na enwere onyinye ịnara ego sitere na PixelHELPER Foundation na-abụghị uru GmbH, ajuju a jụrụ gọnarị na a ga-eweghachi ndị ọzọ. Anyị na-ahụ mmebi iwu nke aghụghọ dị aghụghọ. Marienhaus na-ebugara ndị ahịa ụlọ ọgwụ ndị ọzọ, na-emesịa chọọ ijide nnukwu ụlọ ọrụ dịka ehi. Ndị ji aka ha wepụrụ onwe ha ọrụ na-eme ụdị ihe a na Jamanị na-emezu ihe merenụ nke iwu enweghị ego. Onye ọ bụla nke na-akwakọrọ ngwongwo, ị nwere akụ nke ụlọ ọgwụ, site na ịnabata ego agaghị ata gị ntaramahụhụ. Marienhaus GmbH gbara ụlọ ọgwụ ahụ n'akụkụ nke ụlọ ọgwụ ndị ọzọ dị ka Bingen. Anyị na-agbachitere ndị niile na-eketa ahịa ka ha jụọ Marienhaus GmbH sitere na ụlọ ọrụ ụlọ ọgwụ St. Goar Oberwesel GmbH. PixelHELPER Foundation dị ka GmbH na-abụghị uru agaghị eme nkesa nkesa ọ bụla, kama ọ ga-eduga ngalaba etiti & ụlọ ọgwụ n'ọdịnihu maka ebumnuche na-abụghị uru.
A ga-ezitere ndị na-enye onyinye ozugbo. Nnata nnyefe gị ezuru maka nnata onyinye maka ụlọ ọrụ ụtụ isi ruru € 250.
Na a obere ntule na na Federal Ministry of Healtht PixelHELPER Foundation na-atụgharị na mmechi nke St. Gaanụ / Oberwesel. Ndụmọdụ anyị: GmbH PixelHELPER Foundation na-abụghị uru na-eweghara òkè 55% ma ọ bụrụ na Rhineland Palatinate Ministry of Health site na ego ụlọ ọgwụ, nke ahaziri ahazi maka ịkwụ ụgwọ ezighi ezi, maka ụgwọ ndị ọrụ, ọrụ na-aga n'ihu na mgbasawanye nke ụlọ ọgwụ, na-enye PixelHELPER ohere ịhazigharị ụlọ ọgwụ ahụ ma debe ndị ọrụ niile nọ n'ụlọ ọgwụ Oberwesel ihe karịrị otu afọ. Houselọ ahụ dị na St. A ga-eji goar iji wuo igwe ikuku iku ikuku nke uwa nke ato. Mahadum Marburg ga - eweta ọha mmadụ ikuku dị nfe ikuku maka Africa. Site na iji osisi na akụkụ dị mfe site na ụlọ ahịa ngwaike, a nwekwara ike wuru ventilashị maka mba ndị na-enweghị usoro ụlọ ọgwụ na-arụ ọrụ ugbu a. Ọzọkwa, PixelHELPER Foundation nwere ụlọ ọrụ na St. Hospital Gaanụ rụpụta onyinye ọrụ ebere ndị ọzọ dịka achịcha achịcha nri maka ị nweta nri kwụsie ike, hazie ememme nka ma mee ihe ndị ọzọ iji kwado ụmụ amaala nke St.Goar & Oberwesel. Ọrịa na-efe efe na-abịa, tupu Agha Nzuzo enwere ebe ụlọ ọgwụ inyeaka 40 na Germany, mechiri n'ihi nkwakọba ego. N'oge ọrịa, anyị enweghị ike mechie ụlọ ọgwụ ndị ọzọ. Azịza Jens Spahn sochiri ozi email, na-ezo aka na Ministry of Health na Rhineland-Palatinate. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-eme ihe ngwa ngwa ugbu a. Nkeji 22 A ga-ahapụ ọtụtụ nde enyemaka maka ọrụ na ụgwọ ọnwa na-aga n'ihu na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-abụghị uru ọ bụla, a ga-eme mgbalị iji weta ụlọ ọgwụ na efu ojii n'afọ ole na ole sochirinụ, n'ihi na dị iche na Marienhaus GmbH, GmbH na-abụghị uru enweghị ya ịmepụta uru. Nke ahụ ga - abụ ụzọ dị mma iji opekarịa ụlọ ọgwụ na Oberwesel maka ọrụ ụlọ ọgwụ nkịtị. Anyi na-arịọ RLP Ministry of Health ka eweputara ego ndị ahụ site na ego nhazi, ka ị nyefee ndị ahịa na PixelHELPER Foundation na Marienhaus GmbH ma chekwaa ndị ọrụ n'ụlọ ọgwụ Oberwesel. Yabụ na n'ọdịniihu anyị nwere ike rụọ ụlọ ọgwụ na ụlọ nke ndị agadi n'akụkụ maka nlekọta kachasị mma. Gọọmentị Rhineland-Palatinate nwekwara ọrụ iji rụọ ụlọ ọgwụ na Oberwesel n'echiche maka ndị njem na-eleta Middle Rhine, anyị nwere olileanya na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-enye. Ntinye ego a zitere site na email nkwuchite ụlọ ọrụ ahụ Friling nke Marienhaus GmbH azabeghị azịza ya. Mana anyị na-eche na dị ka ndị German Red Cross, bụ onye enyere ya aka nke osisi 55%, Marienhaus GmbH dịkwa njikere inye anyị osisi 55% maka otu euro. Ọ bụrụ na inweta nke mbakata ahụ anaghị arụ ọrụ, ọ dịkarịa ala, anyị anwalela igbochi enweghị mmechi ụlọ ọgwụ.
Arịrịọ ụmụ amaala iji chekwaa Clọ Ọgwụ Loreley site na proxy August 13th, 2020Oliver Bienkowski
Mmeghari ahihia di ala karie ka ogburu ala
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 5. November 2011
Idobe mkpuru osisi na nkpuru akuku
Itugharighari ahihia karie ala. Akwụkwọ akụkọ kachasị ukwuu na Morocco na-akọpụta taa na anyị chọrọ maka nzuko omebe iwu Australia ka ọ rịọ Moroccan King ka ọ nye anyị ụgbọ ala Hercules-C130 ka anyị nwee ike tọghata ya iji nweta oke ọhịa ọhịa Morocco & Australia. Otu obere ụlọ ọrụ dị ebe a na Moroccan anyị kwesịrị iwepụta akụ nke osisi ahụ, nke a ga-atụfu. Na-enweghị enyemaka nke Eze nke Morocco, ọ nweghị ihe anyị nwere ike ime. Ebe ọ na-azaghị akwụkwọ ozi ikpeazụ anyị, anyị anaghị atụ anya ohere ọ bụla, mana anyị nwere obi ụtọ maka ihe ịtụnanya dị mma.
Osisi darts si 3D na ngwa nbipute
Mmeghari ahihia di ala karie ka ogburu ala April 21st, 2020Oliver Bienkowski